SingForYou.net - Nar Lel Par
Nar Lel Par
Tags : Big Bag
By : doneti on Jan 17, 2010
Score: 126 Rating: 4.67 Comments: 49
Nar Lel Par's Description
နားလည်ပါ.... ဘောလုံးပွဲ ရှုံးလို့..နားလည်ပါ..ပိုက်ဆံချေးကြပါ..နားလည်ပါ..
gigi on Nov 20, 2010 0
came to listen the song. great singing!
smillingstar on Nov 20, 2010 0
CesCy on Sep 2, 2010 0
de song nae\_' lite tal bro / very nice!
laldinhnget on Aug 1, 2010 0
hi sing more song bro,,,,,,,.,.,.,.,.,.,,
doneti on Aug 12, 2010 0
Junan on Jun 24, 2010 0
I like it ....:))
doneti on Jul 21, 2010 0
I thank it.... :P Thank U...Sis.. :)
yellownavy on Jan 26, 2010 0
Oh Wow.... I simply LOVE the way you sang this song.... very skillful style.... by the way, this voice of yours differs from your second song.... :) 5*
doneti on Jan 27, 2010 0
2 yout so htarr tar go.. :P (nout tar) ကျယ်ပြီး ပြဲသွားလို့ ဖြစ်မယ်.. ဒုတိယ အကြိမ် ခေါင်မိုး တက်ပြင်လိုက်ရပြန်ပြီ...(မြောက်ပြီး သွားဆောင့်တာ..ပေါက်ထွက်သွားတယ်လေ..) ဒီလောက်နားဝင်ဆိုးတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ငါပဲ မျက်စိမှားလေသလား.. :P Thanks for your comment.. :)
darhayhso on Jan 23, 2010 0
kg par de.. 5****** par... but mood po twin yin ayan kg mal
doneti on Jan 24, 2010 0
ဟုတ်ကဲ့...ဒါပေမယ့် အဲဒါက mood ပါတယ်ဆို ယုံမလား မသိ? :P Thank U.. :)
zezawar on Jan 20, 2010 0
doneti on Jan 21, 2010 0
kounghtetsan on Jan 20, 2010 0
ဟိုက်ရှားပါး.. ဘယ်သူများလဲလို့.. အဆိုတော် ဆရာကြီးပဲကိုး.. ကောင်းတယ်ဗျာ.. great sing & cool vocal သူငယ်ချင်းရေ.. အားပေးသွားပါတယ်.. သူငယ်ချင်းရေ.. နောက်လည်း ကြုံတုန်းလေး ၀င်ပြင်ပေးသွားပါဦးနော်.. ဆရာကြီး.. 5******** ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
အီး...ရွဲ့သွားလား အောက်မေ့ရတယ်..စေတနာနဲ့ လိုက်အမှားပြင်ပေးတာပါဗျာ....မကောင်းမမြင်ကြပါနဲ့... ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးပါ.. :)
panshwe on Jan 19, 2010 0
စီနီယာကြီး ဘောလုံးပွဲလောင်းတယ်.. ဆရာမနဲ့ သွားတိုင်ပြောမယ် အဟဲ .. အသံကတော့ နည်းနည်းကျယ်လာပြီ. .. ချထားကွ.. ********************* တွေပေးသွားတယ်.. :)
doneti on Jan 19, 2010 0
အတော်ကျယ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား? :( ဘယ်လိုမှ ညှိလို့ မရဘူး..မိုးရယ်...အဲလေ..သီချင်းရယ်.. :P ကျေးဇူးပါ.. :)
brownlay on Jan 18, 2010 0
kyite tel byo. sis hippo comment ko... ae hote par buu so htar dar ko *********!
doneti on Jan 18, 2010 0
အဲလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ...ဟဲ..ဟဲ.. :P Thank U par.. :)
hippo on Jan 18, 2010 0
အရှုံးနဲ့ အနိုင် နှစ်ခုပဲရှိတာ ရှုံးရင် ရှုံးတယ်လို့မှတ် . . .
ဘယ်...... သရေလည်းရှိပါတယ်ဗျ...(အဲလိုပဲ အငြင်းသန်ပါတယ်) :P Thanks.. :)
sumaylay on Jan 18, 2010 0
bro doneti ........so twar tar ayan ko kg par tal........နားလည်ပါ....so tae nay yar mhar tot thate ma aww naing bu naw.........baw lone pwal shone htar lo htin tal....:P.....anyway.........*****
D lo par bel.. Mood ka kya nay tar so tot.. :P Thank U naw.. :)
Minkha on Jan 18, 2010 0
bro doneti.... bal2khar tg try lite ya lae... kyanaw win kyi tay tal nya ka tae ka..... song ka te lone pal lar tal....akhu tot perfect phit twar p..... listen ya tar taw tawasin pyay tal.... arr pay twar tal bro!*********4 u bro!
သိပ်မများပါဘူး...အခါ၂၀တည်းရယ်ပါ.. :P Thanks for your comment.. :)
aklwin on Jan 18, 2010 0
Did i see you before??? Are you from Jamaica?
ငါ့နှယ်..သေသာသေလိုက်ချင်ပါတော့တယ်..မင်းအိမ်မှာ လာလာတည်းတဲ့ ကောင်(ငါ့)ကို တောင် မမှတ်မိဘူးလားကွ..
chitmoe2009 on Jan 18, 2010 0
good par tal...
ဘာ ဂွတ်တာလဲ? မဆိုရင်လား... :p Thanks... :)
ngwesele on Jan 18, 2010 0
chi bu chi buu .... baw lone pyal shone lo myar thi chin ka tot nar htaung lo ayan kg tal
ဘယ်သူမှ အားကိုးလို့ မရပါလားနော်... :P Thank U.. :)
SCH7677009 on Jan 18, 2010 0
kya taw lel ဘောလုံးပွဲ ရှုံးလို့ money ma shi pyit nay tal...nar lel par tal byar...football match tway lose yindlo pae...so htar ter kg tal...
ဝါသနာတူ...ဘဝတူများ... SFY မှာ လာစုနေကြတာကိုး.. :P Thanks for your comment.. :)
forevermoe on Jan 18, 2010 0
ae` ဘောလုံးပွဲ ရှုံးလို့ so htar tae song ka mite tal ..so htar tar ko tot arr pay twer par tal shint ..ဘောလုံးပွဲလောင်းတာကိုအားမပေးလို့ပိုက်ဆံချေးတော့ဘူးနော်...းP ( pyan nar lal pay par nor ..)
နားလည်ပေးပါတယ်ဗျာ... ဘူပြောလည်း ဘောပွဲလောင်းတယ်လို့... ဝင်ကန်တာဗျ... တစ်လုံး ပြား၃၀ ကြေးလေ... ဂိုး infinity အထည့်ခံလိုက်ရလို့... မွဲသွားတာ... :Pွှကျေးဇူးတင်ပါသည်.. :P
lalaynge on Jan 18, 2010 0
အဟမ်း အဟမ်း ကောင်းပါ၏ရှင်..******
ချောင်းခဏခဏဆိုးတတ်တာကို လှောင်တာလား? :PွှThank U ... :)
ngeloveuforever on Jan 18, 2010 0
မိုက်တယ်ဘော်ဘော်ရေ။သီချင်းက ကွက်တိပဲကွ။ အားပေးသွားတယ်။ ဒါနဲ့ မင်း ဘယ်ပွဲရှုံးတာလဲ။ ငါနဲ့တူလားလုို့ပါ။ ပီား....
နောက်တာပါဂျ.. တကယ်လောင်းပါဘူး... သီချင်းကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ သွားနေတာဆိုတော့ ကွက်တိပေါ့ဗျ.. အနော်ဆိုတာက ဘယ်လိုလဲ လည်း မပါဘူး.. :PွှThank U par.. :)
whitekisslay on Jan 18, 2010 0
Ahek hek ..:P..galo lar? dar so nar lel lite p......so twer tar nice singss par ko doneti************nor...arrpayy narr sin twer par tal shin:)
sithunaung on Jan 18, 2010 0
ner lal per tal..pite san ka tot ma shi loe..shi yin borrow per ohn .. credit buy chi loe:P..arr loneasin pyay per tal..ner htg ya ter..ber ma ko pyaw sa yar ma lo ag good per tal ko doneti yayyy:)) ..5 *************for you :))
ပိုက်ဆံတောင် ပြန်ချေးရဦးမယ် ဟုတ်လား? ဆောရီးဗျာ..လူကို ခင်ရင် ပိုက်ဆံ မချေးပါနဲ့.. :Pွှ့Thanks for voting.. :)
susannyunn on Jan 18, 2010 0
el....... bro g......mic vol level yu ka hte ka 85 lout yu htar lay..... p yin mixing mar muzic bat ko pelz adjust loat p....vocal bat ko ma go nelz lay....:)))) buy lite tot hey.....mic ko...ahaaaaaaaa........>>>>>asho ka tot...pai ma pai pelz chint.....arr pay nar sin htwar par te....bro g.....>>>>>
စောစောက ပြောမှပြောဘဲလို့....ဘယ်သိပါ့မလဲ... :( Thanks for your advice.. :)
crycupid on Jan 18, 2010 0
good voi pa` bro......taw taw kaung tal byar...5* for u
Thank U for your voting... :)
paradise on Jan 18, 2010 0
ဒီတစ်ခါရော သေချာပြီလား.....အားလုံးကောင်းတယ် ဘာမှကို ပြောစရာ မလိုတာ...ပထမ အပုဒ်ကို delete လုပ်တာလား မကျေနပ်ဘူး.....
်ပထမ အပုဒ်က ဆိုသံတိုးနေလို့... မတင်ခင် အားလုံး ညှိပြီး ok တယ်...အဲပေါ်လည်း ရောက်ရော..အသံက တိုးသွားရော.. ဒီတစ်ခါတော့ သောက်ညင်ကတ်ကတ်နဲ့ vocal ဖိယူချလိုက်တာ... တီးလုံး က တိုးသွားပြန်ရော..ငါ့နှယ်... ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလား (တွတ်ပီ)
Subscribe to doneti